Maitiro Ekuchinjisa Spotify Playlists kuApple Music | IPhone nhau
Maitiro Ekuchinjisa Spotify Playlists kuApple Music
Kubva pakauya Apple Music, vazhinji vedu takachinjira kubasa raApple uye taifanira kuendesa raibhurari yedu yese yemumhanzi kwairi. Kana kuenda kuburikidza ese maalbum uye maartist ingave iri basa rakaoma, hazvisi kuti zvinotora nguva yakareba, kunyangwe zvichinyatsoenderana nesaibhurari yako Asi chii chinonzi kurwadziwa kukuru kuri kuenda kuburikidza nemitambo yekutamba, nekuti inowanzo kuvezwa akasiyana maartist maartist akasiyana masitayera uye nguva uye izvo isu tanga tichikura nekufamba kwenguva. Zvisinei ikozvino pane nzira yakapusa yekufambisa Spotify kana Rdio playlists kuApple Music, inoshanda chaizvo uye iri kukurumidza uye yakapusa nekuda kweMoveToAppleMusic.
MoveToAppleMusic chishandiso chiri nyore kwazvo, zveMac OS X chete panguva ino, iyo inokutendera iwe kuendesa zvinyorwa zvako kune Apple's mimhanzi sevhisi. Panguva ino inowirirana neSpotify uye Rdio, kunyangwe zvemberi inclusions zvisina kubviswa kunze Ehezve, iko kubhadhara muripo ($ 4,99) iyo inongogamuchira PayPal uye hapana chekuyedza vhezheni. Kuti utore iyo unogona kuwana kubva pane iyi link kuenda kune yepamutemo peji.
Kamwe yakadhindwa uye yaiswa iwe unofanirwa kuisa yako Spotify kana Rdio account. Iko kunyorera kunoshandisa maAPIs epamutemo ezvose zviri zviviri kunyorera, saka makiyi ako akachengeteka. Iwe unofanirwawo kugamuchira iko kunyorera kwekushandisa kune ruzivo rwako.
Kana kese kuita kwekupinda kwapera, iko kunyorera kunokuratidza zvinyorwa zvako, pamwe nenhamba dzenziyo idzo imwe neimwe iine. Unogona kuvasiya vese vakasarudzwa, sezvazvinoonekwa nekukasira, kana chingomaka iwo aunonyatsoda kuendesa kuApple Music. Kana izvi zvangoitwa, tinya pa «Inotevera» uye gadzirira iyo chikamu chemaitiro icho chisingaite otomatiki, asi chiri nyore kwazvo. Dzvanya pa «Capture Session» uye vhura iTunes, maka rwiyo seunofarira (nekudzvanya pamwoyo) uye inogamuchira windows inoonekwa (ayo akati wandei). Kana izvi zvaitwa, iwe uchaona kuti zvese zviri izvo chaizvo nekuti iyo MoveToAppleMusic hwindo inokuudza kudaro.
Dzvanya pane Inotevera uye kuchinjisa kuchazotanga, yatove nzira yekuzvidzivirira yausingade kupindira, uye unogona kuenderera uchishandisa komputa yako pasina kana dambudziko. Mukuita uku, andisiira kunze nziyo gumi nembiri, idzo gumi dzacho dzichibva muakare imwecheteyo, asi ipapo ini ndanga ndichikwanisa kuzviwedzera nemaoko pasina matambudziko.
Paunenge wapedza iwe unogona kusevha zvinyorwa zvako pakombuta yako kuti uzviunze gare gare muTunes. Kuti uite izvi, unofanirwa kudzvanya pane "Sevha Yangu Playlist Mafaera" uye akati wandei mafaera mameseji achachengetwa, rimwe kune yega runyorwa, munzvimbo yaunoratidza. Pasi pazasi iwe zvakare une runyorwa nenziyo dzisingawanikwe "Sevha runyorwa rwe nziyo dzisina kuwanikwa", kuti ugone kuzvitsvaga pasina matambudziko. Kuti upinze mafaera e "txt" akagadzirwa unofanirwa kuenda kumenyu yeTunes> Faira> Raibhurari> Tumira runyorwa. Ruzivo rwakakosha: Kana yako system iri mune mumwe mutauro kunze kweChirungu, izvo zvingangoita, iwe uchafanirwa kushandura mutauro mune ehurongwa masisitimu kuChirungu. yeTunes kuti ione mafaira ako ekupinza. Kana uchinge wapinzwa kunze, unogona kuendesa kuSpanish zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Maitiro Ekuchinjisa Spotify Playlists kuApple Music
Makonye 3, chikamu chechitatu chehondo pakati pemakonye ndiko kushandiswa kwesvondo
2016 Volkswagen Models Icharatidza CarPlay